आईपीओ निष्कासन गर्न युनियन र सानिमा लाईफद्वारा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन - Arthakoartha.com
काठमाडौं, १ असार । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेका छन् । बोर्डमा दुवै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि जेठ ९ गते निवेदन दिएका हुन् । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले रू. ६४ करोड ५० लाख बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले रू. ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका हुन् । दुवै कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ ।
युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल रू. १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रहेको छ । युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओलाई इक्रा नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने संकेत गर्ने ‘इक्राएनपि आइआर ट्रिपल बि’ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको हाल चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४० करोड रहेको छ । सानिमा लाईफले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको संकेत गर्ने त्रीपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८० अर्ब ४ करोड
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि नयाँ मापदण्ड जारी, सातदिने क्वारेन्टिनको व्यवस्था हट्यो